अब कसरी अघि बढ्छ संविधान निर्माणको काम ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → अब कसरी अघि बढ्छ संविधान निर्माणको काम ?
अब कसरी अघि बढ्छ संविधान निर्माणको काम ?
August 10, 2015४५५ पटक
काठमाडौं, साउन २५ – दिनरातको छलफलपछि मुख्य दलहरु सीमांकन सहितको ६ प्रदेश बनाउन सहमत भएका छन् । धर्म र थ्रेसहोल्ड टुंगिन बाँकी भएपनि दलहरुले संविधानको मस्यौदामा नागरिकले दिएका धेरै सुझाव समेट्ने प्रयास गरेका छन् । संविधानसभाको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा)लाई नागरिकले दिएका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
केही कुरामा सहमति जुट्न बाँकी भएपनि दलहरुले नागरिकका सुझाव समेट्ने प्रयास गरेका छन् । नागरिकको सुझाव अनुसार नै सीमांकन गरिएको छ । यस्दै नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको साटो बाबु वा आमा भन्ने शब्द राखिएको छ । नगर र गाउँपालिकाका हरेक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था, राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, अल्पसंख्यकसँगै अपांगता भएको अधिकार थप, स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, प्रदेशमा पनि महिला र दलित आयोगको कार्यलय, सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका विषय पनि परिमार्जित प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
साउनको पहिलो हप्ता नागरिकको सुझाव संकलन गरेर फर्किएलगत्तै मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले साउन मसान्तमा संविधान घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर संवाद समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलो गरेपछि साउन मसान्तमा संविधान घोषणा हुने सम्भावना टरेको छ । दलहरुले अब भदौ १० को अर्काे तिथि तय गरेका छन् ।
आइतबारको संविधानसभा वैठकमा पेश भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा परिमार्जनको प्रतिवेदनमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु हुन्छ । संविधानसभा वैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि परिमार्जनका लागि मस्यौदा समितिमा पठाइन्छ । मस्यौदा समितिले परिमार्जन सकेर प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाउँछ । त्यसपछि फेरि त्यो प्रतिवेदनमाथि संविधानसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । यसअघि जस्तै संशोधनको लागि सभासदलाई समय दिइन्छ । संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ । त्यसपछि त्यो विधेयकलाई संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । संविधानसभामा सर्वसम्मत नभए मतदान प्रक्रियामा लगिन्छ । टुंगो लागेपछि प्रस्तावना तयार हुन्छ र प्रस्तावनासहितको एकीकृत विधेयक पारित गरिनेछ । त्यसपछि सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ ।